Golaha wasiirada Sudan oo kulan deg deg ah ka yeeshay kulan dhexmaray hogaamiyayaasha Sudan iyo Israel - BANDHIGA
Golaha wasiirada Sudan oo kulan deg deg ah ka yeeshay kulan dhexmaray hogaamiyayaasha Sudan iyo Israel
Golaha wasiirada dalka Suudaan ayaa kulan deg deg ah ka yeeshay kulankii dhawaan Uganda ku dhexmaray hogaamiyaha Suudaan Cabdul Fataax Burhaan iyo ra’iisul wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu.
Afahayeen u hadlay golaha wasiirada ayaa sheegay in aysan ka war heyn waxyaabaha ay ka wadahadleen labada hogaamiye isla markaasna kulankooda ay ka arkeen oo kaliya ah baraha bulshada.
Wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Suudaan, Feysal Maxamed Saalix ayaa sheegay in aanan wax wadatashi lagala yeelan kulanka Cabdul Fataax Burhaan iyo Benjamin Netanyahu.
“Haddii aan nahay golaha wasiirada, ma jirin cid inoo sheegtay ama nagala tashatay kulanka, waxaan ka dhuursugeynaa arrintaas kaddib marka madaxweynaha uu kusoo laabto dalka” ayuu yiri wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Suudaan, Feysal Maxamed Saalix.
Xafiiska ra’iisul wasaaraha Israa’iil ayaa Isniintii shaaca ka qaaday in uu kulan la qaatay hogaamiyaha Suudaan isla markaasna ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka labada dal.
Qoraal uu Netanyahu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay kulan “taariikhi ah”
Suudaan iyo Israa’iil waxaa ka dhex taagneyd xiisad diblumaasiyadeed xilligii uu dalkaas ka talinayay Cumar Xasan Al Bashiir.
DEG DEG .. Dalxiisayaal fara badan oo ku xayiran New Zealand
Diyaarad ka degtay garoonka degmada Doolow ee gobolka Gedo